Wararka Maanta: Axad, Feb 9 , 2020-Soomaaliya iyo Morocco oo iska kaashanaya maaraynta biyaha iyo ilaha tamarta
Shirka ayaa diiradda lagu saaray is-weydaarsiga khibradaha ee dhinacyada korantada, biyaha la cabbo iyo maareynta biyaha wasakhda ah.
El Hafidi wuxuu iftiimiyay istiraatiijiyadda tamarta ee ay hogaamineyso Boqortooyada Morocco iyadoo xoogga saareysa horumarinta tamarta la cusbooneysiin karo iyo sidoo kale horumarka ay Morocco ka sameysay waaxda korantada.
Waftiga Soomaaliya waxay booqdeen xarunta daaweynta biyaha ee Bouregreg, oo ah qaybta ugu weyn ee soosaarka biyaha la cabbo ee Morocco.
Wasiirka Soomaaliya, ayaa bogaadisay waayo-aragnimada dalka Morocco ee ku aaddan maaraynta biyaha iyo maareynta ilaha tamarta, waxayna muujisay rabitaanka waddankeeda inay ku horumariso iskaashi ay la yeelato Xafiiska Korontada iyo Biyaha ee dalka Maroco.
Si taas loo gaaro, waxaa la isla gartay in la dejiyo qaab iskaashi oo looga golleeyahay in lagu bixiyo taageero farsamo oo dhinaca Soomaaliya ah iyada oo loo marayo wadaagga khibradaha, isweydaarsiga booqashooyinka khubarada iyo dhisidda awoodda aagagga korantada, biyaha la cabbo iyo maareynta biyaha wasakhda ah.